Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Nge-BMK, ilizwe loKhenketho lase-Afrika liphulukene nesigebenga
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseUganda • Iindaba ezahlukeneyo
UGqirha BulaimuMuwanga Kibirige, okwabizwa ngokuba yi-BMK
Ewe, sikunye no-Allah singabaka-Allah kwaye siza kubuya yayingumyalezo xa uMongameli Jikelele wase-Uganda u-Yoweri TK Museveni elamkela igalelo elimangalisayo uGqirha Bulaimu Muwanga Kibirige, okwabizwa ngokuba yi-BMK. Wakhele i-fortune ye-Afrika kunye nezohambo nezokhenketho. U-BMK usweleke esibhedlele eNairobi eshiya amakhosikazi akhe nabantwana abali-18.
Usomashishini obhiyozelwayo wase-Uganda kunye nogqirha wokubuka iindwendwe, uGqirha BulaimuMuwanga Kibirige, okwabizwa ngokuba yi-BMK, usweleke nge-10 kaSeptemba, 2021 kwisibhedlele iNairobi emva komlo omde womhlaza wedlala lobudoda owaqala ukufunyanwa ngo-2015.
Uzalelwe ngo-Okthobha u-2, ngo-1953, u-BMK wayezifundisile, eyindoda eyenziwe yedwa evuka kwinkwenkwana eyaphosa isikolo emva kwamabanga aphantsi asixhenxe ukuthengisa ikofu ecaleni kukayise ongasekhoyo kunye nomcebisi ongasekhoyo u-Hajj Ali Kibirige ukuba abe Oosomashishini abazizityebi nabona badumileyo kwilizwe nangaphaya.
WayenguSihlalo weQela leenkampani ze-BMK kunye nomrhwebi ophumelele amabhaso yenye yezona ndawo zaziwayo zehotele kunye neempawu zommandla kubandakanya i-233 enamagumbi ama-4-ehotele ihotele iAfrican eyindawo efanelekileyo yeentlanganiso kunye neendibano zocweyo kwisixeko saseKampala. kwiziko lendibano elinokuhlala abantu abangama-3,500 XNUMX kunye namagumbi eBMK.
Iqela lokubuka iindwendwe likwanalo notyalo-mali eMoroto eMantla mpuma eUganda nakwihotele iAfrican Africana Lusaka Zambia.
I-BMK ikwatyale imali kwizindlu nomhlaba, izixhobo zokwakha, ukuhambisa izithuthuthu, kunye neofisi zamanye amazwe eUganda, Kenya, Tanzania, Dubai, Rwanda, Japan, naseZambia.
I-BMK ikwaseke ukukhwela i-Boda Boda-igama eliye lafikelela kwisichazi-magama sesiNgesi saseCambridge esithetha “ibhayisekile okanye isithuthuthu esisetyenziswa njengeteksi xa kuthuthwa umntu okanye impahla.”
Usebenze nakwi-Presidential Investors Round Table (i-PIRT), iqonga elikhethekileyo loosomashishini ababalaseleyo abasihlalo balo ngu-Mongameli, abacebisa urhulumente ngendlela yokuphucula imeko yotyalo-mali elizweni.
Ezinye iipotifoliyo ebenazo zibandakanya Ilungu leBhodi yangaphambili kunye noSihlalo weUganda Isahluko seUganda North American Association (UNAA) kunye noSihlalo we-Uganda-American Sickle Cell Rescue Fund.
Wanikwa isidanga sobugqirha sefilosofi kwezoluntu kwiKholeji yaseUnited Graduate naseSeminary.
Ibali likaBMK libaliswa kakuhle kwincwadi yakhe ethi "Ibali lam lokwakha ithamsanqa eAfrika."
Yasungulwa ngo-Matshi 2021 ngelixa wayegula, isixelela ngendlela nangona wayenemiqobo ebomini, wakwazi ukuyenza kwaye wakha ubutyebi e-Afrika.
Ngo-1982, xa wayeza kuba yintombi ehambela eJapan, usomashishini uBMK wafaka ibrifkheyisi nge-US $ 52,000 wakhwela inqwelo-moya edlula eHong Kong. E-Hong Kong, wayezakutshintsha iinqwelomoya ngenqwelomoya yokugqibela.
Ngelixa emgceni kwindawo yokungena kwisikhululo seenqwelomoya, waphumla ityesi yakhe phantsi njengoko wayelinde ixesha lakhe lokufumana indawo yokukhwela.
Isela lathabatha ityesi laza labaleka ngokukhawuleza kangangoko. U-BMK wahlokomisa i-alamu kangangoko anako kodwa loo nto ayizange ilinqande isela njengoko lanyamalala kwisikhululo seenqwelomoya esixineneyo.
Yonke imali yakhe ibingasekho. Ipasipoti yakhe, naye, kwaye akakwazanga ukuya eJapan. Wayezophindiselwa eUganda apho ngewayethunyelwe khona entolongweni okanye ade abulawe.
Wayebalekile kwaye waqala ukuhlala elubhacweni eNairobi ekrokrelwa ukuba wayebandakanyeka kwimicimbi yokuvukela urhulumente ngenxa yobutyebi bakhe.
U-BMK ubalisa ibali lobomi bakhe esebenza namalungu osapho lwakhe, ukuseka amashishini kumazwe amaninzi, kunye namaxesha amyoli ebomini bakhe - izicwangciso zakhe zeQela le-BMK kunye nento acinga ukuba nabani na onomdla wokwakha ubutyebi kule minyaka ingama-40 izayo kufuneka yenza.
Ephefumlela ichibi i-BMK, uMongameli Jikelele wase-Uganda u-Yoweri TK Museveni wathi: “Ndincokola nosapho lukaGqirha Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige (BMK), izalamane, oosomashishini, kunye nabantu abafuna okuhle.
“UGqr. UBulaimu uyakukhunjulwa ngonaphakade ngegalelo lakhe elimangalisayo ekwakhiweni kobutyebi eUganda naseAfrika. ”
“Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo lwanaphakade,” utshilo uNobhala osisigxina we-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho lwezilwanyana zasendle kunye nezinto zakudala, uDoreen Katusime.
“Ukusweleka kukaGqirha Bulaimu Kibirige yilahleko enkulu kumzi mveliso wezoKhenketho nokwamkela iindwendwe.
“Wayeyinkokeli ebalaseleyo kwaye umntu ekumgangatho kwaye enefuthe elikhulu.
“Njengesigebenga somzi mveliso, wayeyinkuthazo enkulu kwabaninzi.
"IBMK iyakuhlala ihlonitshwa kwaye ihlonitshwe ngempumelelo yakhe engummangaliso, kwaye ushiya ilifa eliza kuba nzima ukulingisa."
Ityala lemifanekiso: URonnie Mayanja Uganda Diaspora Network
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Uganda u-Hon. UDaudi Migereko uthe: “Ndifumene iindaba ezibuhlungu zokusweleka kuka-Haji Ibrahim Kibirige we-BMK Group yeenkampani kunye ne-Hotel Africana.
“I-Kibirige yenze igalelo elikhulu kwindwendwe, ukhenketho, kunye necandelo labucala eKampala, eUganda, nakwiGreat Lakes Region ye-Afrika.
Ukusweleka kwakhe yilahleko enkulu kusapho lwakhe, umbutho wezokhenketho, eUganda naseAfrika. Siyabulela ku-Allah ngegalelo kunye nesiseko asishiye ngasemva. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo olungunaphakade.
Ukusuka kumbutho wabanini beehotele zaseUganda (i-UHOA) apho ebesebenza njengosihlalo wexesha elidlulileyo, umyalezo odongeni kuTwitter ufundeka ngolu hlobo: “UGqr. I-BMK yayingumzekelo wokulunga, ukusebenza nzima, ukuthobeka, kwaye wenza lukhulu kwicandelo lokuBuka iindwendwe; uyakukhunjulwa, kodwa ilifa lakhe lihlala e-UHOA nakuwo onke amashishini eBMK. ”
“Phumla ngoxolo mhlobo wam,” utshilo uSusan Muhwezi (Chairlady). “Ekupheleni kweminyaka yoo-2000 xa iBhodi yezoKhenketho yaseUganda kunye nabaqhubi bezokhenketho bebehlala benxunguphele nge-red tape yokuxhasa ngemali imiboniso efana ne-ITB Berlin kunye ne-WTM London, iBMK isebenzise ifuthe layo kwi-Presidential Investors Round Table (PIRT) ukugqitha amagosa aseburhulumenteni nokufumana inkxaso-mali yokuthatha inxaxheba. . ”
U-BMK wayengumSilamsi ozinikeleyo owayenesihloko esithi uHajj wamnika, ebhekisa kumSilamsi othathe uhambo oluya kwilizwe elingcwele laseMecca.
Ushiye amakhosikazi amabini-uSophia noHawa Muwanga- kunye nabantwana abali-2.
“Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un” - Ewe, singabakaAllah, kwaye siza kubuyela kuAllah.